Mpanamboatra fitaovana nify, tanana tanana nify | YAYIDA
YAYIDA Dental Medical Company dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fitaovana nify haingana sy ambany.
Handpiece ambany hafainganam-pandeha nify
Fiarovana amin'ny tanana nify
Jiro Led Dental
Nify X-ray Unit
Mpanamboatra fitaovana nify
YAYIDA - mpanamboatra fitaovana nify matihanina ho an'ny tanana nify, seza nify ary jiro LED nify hatramin'ny 2006
Manam-pahaizana manokana amin'ny fitaovana finday avo lenta sy haingam-pandeha ambany.
YAYIDA Dental Portable 1:1 16:1 1:5 contra zoro miadana hafainganam-pandeha tanana tapa-tanana Electric Motor LED Brushless elektrika micro mo
1. Electric Motor Wide isan-karazany ny asa fanitsiana hafainganam-pandeha.Miankina amin'ny fampiharana, ny hafainganam-pandeha dia azo amboarina amin'ny 100 ka hatramin'ny 200,000 rpm miaraka amin'ny tanana nify samihafa!2. Motera elektrika Maivana sy mirindra miaraka amin'ny torsi ambony.Ergonomika natao ho an'ny halavany sy lanja mba hampihenana ny havizanana mandritra ny ora fiasana maharitra. Ny motera dia azo sterilize amin'ny autoclaving!
YAYIDA Dental Ultrasonic Scaler Soso-kevitra amin'ny Scaling Periodontics Endodontics ho an'ny Woodpecker Ems Satelec DTE
1. Namboarina avy amin'ny High-Quality Medical Grade Stainless Steel.2. Ny mari-pahaizana ambony amin'ny fahamendrehana sy ny fahaleovan-tena mandritra ny fanatanterahana ny fomba fitsaboana klinika3. Ambaratonga ambony amin'ny fanoherana ny hatsarana sy ny harafesina.
YAYIDA dental Curing Light Optical Fibre Guide Glass Tips
1. Araka ny fampiharana samihafa, miaraka amin'ny famolavolana rational sy ny fanamboarana saro-pady, amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta, dia afaka manome vokatra fibre optika isan-karazany izahay, miaraka amin'ny transmissivity mihoatra ny 56% isaky ny metatra.2. Vita amin'ny fibre sy vy mangarahara avo.3. Autoclavable ho an'ny fampiasana miverimberina.
1. Ny drill manicure dia misy fitaovana fanaraha-maso matanjaka sy vy miaraka amin'ny fiasa mandroso / mivadika, manitsy ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana, mekanika ho an'ny fanoloana mora sy haingana ny bits, dia mamaha tsara ny fanapahana amin'ny tendrony, manakana azy tsy hihodina mandritra ny fotoana fohy. fandidiana.2. Ny borosy handpiece dia misy rivotra manokana ho an'ny fampangatsiahana ny micromotor, mba hisorohana ny hafanana sy ho azo antoka miasa mafy.3. Slim famolavolana vy nozzle ho tonga lafatra fihazonana. Ny handpiece dia misy bearings 4 izay miantoka ny vibration maimaim-poana sy ny concentricity tonga lafatra amin'ny fanodinana ny endrik'ilay takelaka fantsika malama tsara.
Ny orinasa YAYIDA dia manana ekipa liana amin'ny varotra sy serivisy aorian'ny varotra. Mandritra izany fotoana izany, mamatsy fivarotana tokana.
Manizingizina ny orinasa "Ny kalitao aloha, ny serivisy aloha". Manizingizina amin'ny akora, fitaovana, fitaovana ary fandrefesana avy any ivelany, mba hiezaka araka izay azo atao mba hahatonga ny vokatray hanatona ny vokatra mitovy amin'ny kalitao tsara indrindra eran-tany.
Ny orinasa dia mampihatra ny famokarana ISO13485, manizingizina ny hamokatra vokatra iraisam-pirenena bebe kokoa. Ary manome serivisy OEM / ODM izahay.
Ankoatra ny fahaizantsika amin'ny orinasa ODM.
Efa mandefa vokatra an-jatony izahay.
Ny tetikasa rehetra iasanay dia voazaha mba hahazoana antoka ny kalitao.
Momba an'i YAYIDA
YAYIDA orinasa nify manokana amin'ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandeha ambany handpiece nify, fikarohana sy ny fampandrosoana ny havany vaovao faritra sy ny vokatra.
Ny orinasa YAYIDA dia manana modely samihafa amin'ny milina NomuRADS avy any Japon, afaka mifanena amin'ny serivisy machining mazava tsara an'ny mpanjifa.
Tianay ny fiainana, ary tianay ny indostrian'ny nify. Manantena izahay fa ny vokatra nify dia afaka hahatonga ny dokotera sy ny fanantenan'ny marary ho tanteraka mora kokoa----Manao nify ho salama.
Ny orinasa dia mampihatra ny famokarana ISO13485, manizingizina ny hamokatra vokatra iraisam-pirenena bebe kokoa.
Tonga mitsidika ny orinasanay ny namantsika, ary te hanao baiko handpiece haingam-pandeha ambony sy baiko handpiece ambany. Faly izy ireo amin'ny tanana tanana nify sy ny serivisy ataonay. Matoky izahay fa ho ela ny orinasa. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia ho lasa antony manosika antsika, hanatsara hatrany ny kalitao sy ny serivisy.